Ngwa ndị dị mkpa maka gam akporo nke a ga - enwerịrị ee ma ọ bụ ee | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa dị mkpa maka gam akporo
Mmanya na-egbu egbu | | android, software
Anyị nwere ọtụtụ puku na ngwa dị na ụlọ ahịa Google akpọ Play Store, mana, n'etiti ọtụtụ, enwere ụfọdụ egosiri dị ka ihe dị mkpa, na ọ bụ iwu na ịwụnye ha N'ihi ọrụ ha dị elu na otu ha si enye ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche na ngwaọrụ gam akporo anyị.
Enwere ọtụtụ, dịka WhatsApp dị ka ngwa izipu ozi n'efu, Dropbox dị ka ihe atụ kachasị elu nke ihe ọ bụ ígwé ojii nchekwa ma ọ bụ Evernote dị ka ngwa iji mepụta na ịtụ ụdị nile nke ndetu onye ọrụ dị iche iche dabere na mkpa anyị. Anyị ga-anakọta ngwa ole na ole dị mkpa ị ga-arụrịrị ee ma ọ bụ ee na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Anyị ga-egosi gị ụdị abụọ ọ bụla dị mkpa yana na ha ga-arụrịrịrịrị na ọdụ gị, yana ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịmalite ịmalite usoro izizi gị na ụwa gam akporo, ebe ọ bụ na Mgbe ụfọdụ ọ naghị adị mfe ịmata ihe dị iche na ngwa Ọ dị mkpa ịrụ ọrụ ụfọdụ ruru ọtụtụ narị puku mmadụ ị nwere na Storelọ Ahịa Play.
1 Messzi ozi n'ịntanetị
2 Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
4 Nchekwa igwe ojii
5 Iji detuo ihe
6 Akụkọ na RSS na-agụ
7 Ihe nchọgharị weebụ
8 Ndị egwu ọdịyo na vidiyo
9 Foto ngwa
10 Ndị na-agụ akwụkwọ E-akwụkwọ
11 Nchekwa onyonyo
Messzi ozi n'ịntanetị
WhatsApp: Ọrụ kachasị ewu ewu na ịntanetị na-ewu ewu na nke a ma ama n'ihi ìhè dị mfe nke ngwa ahụ na obere ibu o chere na awụnyere ya na ọdụ anyị.
bbm: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ozi ozi na ozi ezoro ezo Nke ahụ zuru oke, nke a bụ Blackberry ozi, dị na Android na iOS yana nke nwere nnabata dị mma.
Facebook: Ihe ị ga-ekwu banyere Facebook nke a na-amaghị, na n'ezie ọ gaghị efu na ụdị a, ebe ọ na-enye gị ohere ịnwe ya na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gaa na netwọkụ kachasị ewu ewu na mbara ala. Ọ bụ ezie na enwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ọ nwere ihe ndị dị mkpa.
Pinterest: Anyị nwere ike itinye Twitter ebe a, mana Pinterest na-arụ ọrụ dị ka ejiji na-elekọta mmadụ na netwọk nakwa na ọ bụ nnukwu ngwaọrụ iji chọọ mmụọ nsọ ma kesaa ya na ndị ọzọ, ka ha na-egosipụta onwe ha na Storelọ Ahịa Play.
Twicca: Nke a ngwa nke netwọk nke tweets, ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma na onye inọnyeere anyị ogologo oge na gam akporo. Ọ nwere ihe niile ị nwere ike ịrịọ maka interface dị mfe nke dị mfe ijikwa.
Twitter: Ngwa ọrụ gọọmentị Twitter agaghị adị na otu a ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na nso nso a Emeela ka ọ dị ọhụrụ na gam akporo ma nwee ike ịbụ nhọrọ dị mkpa.
Nchekwa igwe ojii
Dropbox: Ọ bụrụ na WhatsApp kacha mma na izi ozi na Facebook na netwọkụ mmekọrịta, Dropbox bụ ọrụ nchekwa na igwe ojii kachasị mkpa maka gam akporo, ịdị dị ka ngwa dị mkpa maka ekwentị mkpanaaka gị ịkesa nchekwa ma ịgbatị ikike nchekwa.
jottacloud: A maghị ya nke ọma, mana nke a bụ ụlọ ọrụ Norwegian nke nwere ezigbo ọrụ nchekwa na igwe ojii ma bụrụ oke nhọrọ enye 5GB n'efu maka ịmepụta akaụntụ.
Iji detuo ihe
Evernote: Ọzọ nke nnukwu aha mgbe ọ na-abịa nwere ihe ngwa awụnyere dị ka a kwesịrị bụ Evernote, ya ikike dị ukwuu iji mepụta ndetu, dozie ha n'ime akwụkwọ ndetu ma kekọrịta ha na ndị ọrụ ndị ọzọ iji mepụta mmekọrịta dịka ị na-echetụbeghị mbụ.
Google Nọgidenụ: Otu n'ime ọrụ ọhụrụ nke Google bụ Nọgidenụ, iji mepụta ndetu, na magburu onwe minimalist imewe nke nwere ihe niile achọrọ na ngwa nke ụdị a.
Akụkọ na RSS na-agụ
Flipboard: Ngwa a ị nwere ike ike gị magazine nwere isi mmalite dị iche iche nke ụdị ozi niile na ọbụlagodi nke gị. N'iji ezigbo mma ihu, Flipboard bụ otu n'ime ihe dị mkpa maka gam akporo.
gReader: Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-agụ gị RSS faili ntanetịime, gReader bụ ngwa na-akpachara anya na imewe nke ejiri maka ntụgharị na ọsọ nke ejiri ya, inwe ọtụtụ nhọrọ iji hazie ma hazie.
Ihe nchọgharị weebụ
Dolphin Nchọgharị: Anyị nwere Google Chrome, Firefox ma ọ bụ Opera, mana Dolphin Browser jisiri ike were saịtị ya ma dozie onwe ya otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma na can nwere ike ịchọta maka ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Dị mkpa maka ngwa ngwa ya site na ngwa ahụ, ọsọ ọsọ ya na ọtụtụ nhọrọ dị ka ọnọdụ abalị.
Google Chrome: Ihe nchọgharị mkpanaka kachasị mma nke Google jisiri ike ghọọ otu n'ime ihe kacha mma maka gam akporo. Siri ike ịhọrọ, ma dolphin ma ọ bụ google, nwalee ha n'onwe gị.
Ndị egwu ọdịyo na vidiyo
Spotify: Were ọnọdụ a n'ihi na ị nwere onyinye ọhụụ ọrụ maka mbadamba bụ n'efu na na ekwentị ọ ga-ekwe omume ịkpọ listi ọkpụkpọ ọ bụ ezie na nkwarụ na egwu nke otu ihe ahụ ga-ada ụda.
VLC: Ọ bụrụ na VLC bụ ihe ọkpụkpọ kachasị mma maka kọmputa PC, na ụdị gam akporo, ị nwere 4 × 4 iji nwee ike igwu egwu vidiyo na vidiyo niile na ọnụ gị ma ọ bụ mbadamba. Ọ nwere ike na-efu efu gị repertoire nke arụnyere ngwa.
Igwefoto360 kachasị: A free ngwa nwere ike dochie n'ụzọ zuru oke nke ị nwere dị ka ọkọlọtọ na gam akporo gị. Ọ nwere ọtụtụ nhọrọ na ọ kachasị mma ị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play.
Pixlr Express: Anyị nwere ike igosi gị Instagram, mana taa anyị ga-achọpụta gị ọla nke ị nwere ike idezi ma tinye Ọtụtụ narị nzacha dị iche iche iji mepụta nnukwu foto. Pixlr Express bụ n'efu ma kwadoro ya site na Autodesk.
Ndị na-agụ akwụkwọ E-akwụkwọ
Ọnwa + Reader: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ akwụkwọ elektrọnik, Ọnwa + Reader bụ nhọrọ dị oke mkpa iji nwee ọ enjoyụ ịgụ na android gị. Ọ nwere ihe obula enwere ike icho na ngwa dị otú ahụ.
EZPDF Ọgụgụ: Ma ọ bụrụ na ị na-ejikarị faịlụ faịlụ na-agụ agụ na usoro PDF, EZPDF Reader bụ ngwa ọzọ dị ukwuu ịnwe gị mebere n'ọbá akwụkwọ na ekwentị gị ma ọ bụ na mbadamba.
Imgur: Otu n'ime ọrụ nke ejiji oyiyi nnabata na ọbụna awade ike ịkọrọ onye ọ bụla gị amamihe gị mgbe ọ na-abịa foto.
Flickr: Ga-enye gị 1 Terabyte iji chekwaa ọtụtụ puku nke foto ịchọrọ, ịbụ otu n'ime ọrụ nchekwa foto kacha mma n'ịntanetị.
Enwere ọtụtụ edemede na anyị ahapụla n'ime ụzọ ụgbọ mmiri, ma iri na otu ahụ ekwuru ga-emepe ọhụụ ọhụrụ mgbe a bịara n'ịmụ banyere ngwa ọhụrụ, ebe ọ bụ na anyị akpọghị aha Instagram ama ama na foto ma ọ bụ na egwu, ọrụ Google Play Music.
Ozi ndị ọzọ - Otu esi mepụta ma jikwaa nchekwa nchekwa na Dropbox maka gam akporo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ngwa dị mkpa maka gam akporo
Idozi mkpọka na Windows 8 ya na nhọrọ dị iche iche dị elu
Jiri Windows 7 Desktop Search Connectors